1. Dad badan ayaa loo bartay isticmaalka kumbuyuutarrada Windows muddo dheer waxayna ogaadeen in Mac-gu ay adag tahay in la isticmaalo, iyadoo aan la ogeyn waxa furayaasha kulul ay yihiin, ma yaqaanaan, mana fiicna, runtiina, Mac-gu waa nidaam hawlgal oo deggan. Waxay leedahay nidaam caalami ah oo la aqoonsan yahay oo amniga ah oo ka fududahay in la isticmaalo sida aad u malaynayso. Maanta waxaan soo bandhigi doonaa sida loo qaado shaashadda Mac OS, kuwaas oo ah habab badan oo aad u fudud.
2. Qabashada shaashad buuxda adigoo riixaya Shift + Command + 3 furayaal isku mar.
3. Markii la maqlo dhawaqa snapka Shaashadda la soo duubay ayaa lagu keydin doonaa Desktop-ka waxaana loo isticmaali karaa hadba sida loogu baahdo.
4. Qabashada dalagga gacanta adigoo riixaya Shift + Command + 4 furayaal isku mar.
5. Waxaad ku arki doontaa calaamadda "+" hareeraha tilmaamaha jiirka. Qabo bidix guji oo jiido aagga aad rabto inaad toogato. Kadib sii daa jiirka. Sawirada aad soo qaaday waxaa lagu keydin doonaa Desktop-ka.
6. Tusaale sawir lagu duubay dalag xul ah.
7. Qabashada shaashadda iyo duubista fiidiyowga shaashadda adigoo riixaya Shift + Command + 5 furayaal isku mar.
8. Nidaamku wuxuu soo bandhigi doonaa liiska qabashada si loo xusho sida sawirka ka muuqata.
9. Hawlgalka menu kasta wuxuu ka socdaa bidix ilaa midig: ● Qabsada shaashadda oo dhan ● Soo qaado kaliya daaqadda firfircoon capture Qabashada dalagga gacanta ● Diiwaangeli fiidiyowga shaashadda oo dhan ● Diiwaangeli shaashadda shaashadda xulashada. Buugga options Fursadaha hawlgalka ee dheeraadka ah button Badhanka qabashada - Qabashada ama Diiwaanka - bilow duubista fiidiyowga. Markii duubista fiidiyowga ay bilaabato, waad joojin kartaa duubista wakhti kasta adoo gujinaya "◻" calaamadda ku taal baararka midigta kore ee midigta. Markaad gujiso Jooji, fiidiyahaaga ayaa si otomaatig ah loogu keydin doonaa Desktop-ka.
10. Oo halkan waxaa ku yaal dhowr tilmaamood oo waxtar leh oo lagu dedejinayo waxyaabaha inta Mac-kaaga uu shaashadda qabanayo. Falanqeyn yar oo feylka sawirka ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa geeska midig ee hoose. Waxaad u adeegsan kartaa jiirka si aad u gujiso oo aad u xajisato sawirka horudhaca ah oo aad u jiido oo aad u dhigto barnaamijka LINE ama dukumiintiyada google si aad ugu dirto ama aad dib ugu bilowdo shaqada isla markiiba.
11. Tusaalaha kor ku xusan, waxaa laga arki karaa in Mac OS-yada sameeysa sida Apple ay fiiro gaar ah u leeyihiin faahfaahinta yar ee shaqadooda. Xitaa qaadashada shaashadda leh hawlo kala duwan oo laga kala xusho. Badbaadiyaa waqti badan jarista sawirro ama fiidiyowyo. Soo rogi karaa faylasha la soo gudbiyay ama isla markiiba la isticmaalay. Waxa kale oo jira talooyin waxtar leh oo ku saabsan adeegsiga Mac OS si ay kaaga caawiyaan in shaqadaadu u fududaato oo dhaqso u hesho. Dhagsii si aad ula socoto degelkeenna si aad u hesho warar iyo maqaallo xiiso leh oo aan dhigeyno munaasabadda xigta.